Jamaal Cali Xuseen oo Qurbeejoogga Reer Saaxil ee UK la qaatay Kulan ay taageero ballaadhan ugu muujiyeen (+ Sawirro) - Somaliland Post
Home News Jamaal Cali Xuseen oo Qurbeejoogga Reer Saaxil ee UK la qaatay Kulan...
Jamaal Cali Xuseen oo Qurbeejoogga Reer Saaxil ee UK la qaatay Kulan ay taageero ballaadhan ugu muujiyeen (+ Sawirro)
London (SLpost)- Qurbejoogga gobolka Saaxil ee ku dhaqan Waddanka UK, ayaa kulan ballaadhan oo ay taageero ugu muujinayaan ku qaabilay murashaxa madaxweyha ee Xisbiga UCID Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo muddooyinkii u dambeeyey socdaal shaqo ku joogay Waddanka Ingiriiska.
Kulanka oo xalay ku qabsoomay magaalada London isla markaana ahaa mid lagu soo sagootiyey Murashaxa UCID oo u soo amba-baxaya dhinaca dalka Somaliland, waxa ka qayb-galay Aqoonyahanka, wax-garadka, dhalinyarada iyo Haweenka qurbejoogga reer Saaxil ee ku dhaqanka waddanka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London iyo nawaaxigeeda, kuwaas oo dhammaantood u muujiyey murashaxa sida ay ugu garab-taagan yihiin hankiisa siyaasadeed ee uu halganka ugu jiro inuu u tartamo hoggaanka ugu sarreeya dalka.
Aqoonyahan, wax-garad iyo Haweenka qayb-galay kulankaas oo hadallo kala duwan ka jeediyey, ayaa sheegay in bulshada gobolka Saaxil taageeradooda dhaqaale iyo codka la garab-joogaan murashax Jamaal Cali Xuseen iyo Xisbiga UCID ee uu hoggaankiisa ka mid yahay, haddii ay yihiinna qurbejooggii gobolkana ay ka hawl-gali doonaan sidii kor loogu qaadi lahaa taageerada xisbiga UCID. Dadkii Xafladda ka hadlay, waxay dhammaantood iska daba-mareen in loo baahan yahay isbeddel lagaga gudbi karo xaaladda siyaasadeed iyo dhaqaale ee dalku ku sugan yahay xilligan.
Gebo-gabadii munaasibadda waxa hadal ka jeediyey Murashax Jamaal Cali Xuseen oo qurbejoogga reer Saaxil uga mahad-celiyey taageerada ay ku bar-bartaagan yihiin. Haseyeeshee, waxa uu ka dalbaday maadama oo uu isagu gobolka u dhashay inaanay ku taageerin Qabiil sida caadada u ah siyaasiyiinta kursi doonka ah ee u loolamaya hoggaanka sare ee dalka, balse ay isaga taageerada ku siiyaan Kartidiisa iyo Aqoontiisa iyo Hankiisa siyaasadeed oo uu ku sheegay mid la mowqif ah hoggaamintii Madaxweynihii labaad ee Somaliland Marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal.
Jamaal waxa uu halkaas ka sharraxay siyaasadda Xisbiga UCID ku hoggaamin doono umadda haddii uu ku guulaystay talada dalka doorashooyinka soo socda ee madaxtooyada, waxaanu rejo ka muujiyey in xisbiga UCID ku guulaysan doono hoggaaminta dalka.
Murashax Jamaal Cali Xuseen ayaa la filayaa inuu ka soo amba-baxo dalka UK, isaga oo socdaal ku soo mari doona waddanka Isu-tagga Imaaraadka Carabta oo wakhtigan ay ku sugan yihiin Wefti uu hoggaaminayo madaxweynaha Somaliland oo dorraad ka amba-baxay magaalada Hargeysa. Sidoo kale, waxa waddanka Imaaraadka Carabta ku sugan madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale Kaahin oo la filayo inuu maalmaha soo socda socdaal ku yimaaddo dalka.